မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ရှိ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတက္ကသိုလ် အဆောင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား - Ministry of Education
မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ရှိ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတက္ကသိုလ် အဆောင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား
Date : 11 August, 2017
August 11, 2017 - 1:22 pm | News
တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတက္ကသိုလ်အဆောင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ တွင် မိတ္ထီလာမြို့ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ရှိ အဆိုပါ ကျောင်းဆောင်ရှေ့၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းနားသို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုင်းကျော်ဇော၊ မန္တလေးတိုင်းဒေကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့်အဖွဲ့များ၊ ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတက္ကသိုလ်အဆောင်အား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့တမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့်ဇနီး၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသိန်းဝင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကြည်သွင်၊ မြန်မာ-တရုတ် ပူးပေါင်းကူညီဆက်ရေး ဗဟိုအသင်းမှ Mr. Li Bo Bo တို့ကဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။
ယင်းနောက် တက္ကသိုလ်အဆောင်ကမ္ပည်းမော်ကွန်းအား အမွှေးနံ့သာရည်ဖြင့်ပက်ဖျန်းပေးကြပြီး ကျောင်းဆောင်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြသည်။
ထို့နောက် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုင်းကျော်ဇော၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang တို့က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကြသည်။
ယင်းနောက် သံအမတ်ကြီးက တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတက္ကသိုလ်အဆောင်နှင့် ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းနှင့် ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ(Scholarship)တို့ကိုပေးအပ်ရာ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကြည်သွင်က လက်ခံရယူပြီး အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး တက္ကသိုလ်အဆောင် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့် Shan Shui Construction Engineering Co.,Ltd မှ Mr. Li Bo Bo တို့အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားသည်။
‌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရာတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် လိုအပ်နေသည့် နှစ်ထပ်အိပ်ဆောင်ကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း ပေးပါသော တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် တရုတ်ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးပိုမိုအဓွန့်ရှည်ရေး ဆုမွန်တောင်းပါကြောင်း၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ဤကျောင်းတော်မှ မိမိဝါသနာပါရာ ပညာရပ်များကိုဆည်းပူးပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော ဘွဲ့ရလူငယ်မောင်မယ်များ ဖြစ်အောင် သင်ယူကြစေလိုကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဘဝတွင် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲပြဿနာမှန်သမျှကို အချင်းချင်းပူးပေါင်းကူညီကြပြီး ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်‌ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် နိုင်အောင်နှင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော လူငယ်များ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက် စေလိုကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများခင်းကျင်းပြသထားသော ပြခန်းများကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Total Hits : 753419